Uncategorized | Border Nepal Buddhi | Page 2
Inundation in Nepal by Indian Constructions
Posted on July 25, 2019 by bordernepal
Indian Constructions near to Nepal border
India has constructed various structures along the border with Nepal as followings:
4) Link Bunds
5) Ring Dams
6) Water Bondage
भारतले नेपालसंगको सीमावर्ती क्षेत्रमा माथि उल्लिखित संरचना बनाउनाको कारणले नेपालको तराई क्षेत्र
– वर्षा याममा करिब १२,४०० बिगाहा र
– सुख्खा याममा पनि २,८०० बिगाहा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
– यस्ता भारतीय संरचनामध्ये
1. बांके दक्षिणको Laxmanpur Barrage
2. कपलिवस्तु नजिकको Mahalisagar Barrage
3. रुपन्देहीको Rasiwal-Khurda-Lotan Link-Bund
4. रौतहटको Bairgania Ring-Dam
5. सिरहाको Siraha Embankment
6. सप्तरीको Kunauli Water Bondage
7. मोरङको Water Bondage आदि रहेका छन् ।
= Koshi Barrage, Gandak Barrage Bhaisalotan को त नामलिइरहनु नै पर्दैन । सबैलाई जगजाहेर नै छ ।
= सरकारले प्रतिमृतकको मोल रु. १ लाख तोकेर तिनका परिवारलाई रकम दिन लागेको छ । यही नै डुबान समस्या समाधान हो कि होइन कुन्नी !
= भारतले नेपालसंगको सीमावर्ती क्षेत्रमा १,७५० किलोमिटर राजमार्ग केही बनाइसक्यो भने अरु बांकी बनाउदै छ । यसले पनि नेपाल तराई डुबानमा पारेको छ ।
नेपालमा डुबानको प्रकोप हुन नदिन भारतीय Barrage, Dam को ढोका प्रशस्त संख्यामा खोलिनु पर्छ ।
2. राजमार्गजस्तो संरचनामा आवश्कतानुसार Culvert / Outlet बनाइनु पर्छ ।
3. भारतमा बाढीले वितण्ड मच्चाउन नदिन नदीको दायां–बायां दुवै किनारमा अग्लो अनि निकै लामो तटबन्ध बनाएर बाढीको पानी बीचको निश्चित धारबाट बगाउने प्रत्रिया अपनाउन सके दुवै देश पुग्छन् ।
4. होइन भने वर्षामा नेपाली जनता कोलाहल मच्चाउंछन् ।
डुबेर मरेका आफन्तले एक ज्यानको एक लाख बुझ्छन् ।
अनि हिउंद लागेपछि तैंचुप मैंचुप हुन्छन् ।
5. फेरि अर्को वर्ष नेपाली सीमावर्ती अरु ५० औं जनताको ज्यान जान्छ ।